Umthandazo kwiNtombi Enyulu yaseGuadalupe. ? Ukukhuselwa, iAmparo kunye noMmangaliso
Umthandazo kwiNtombi Enyulu ukusuka eGuadalupe ukuphakamisa ngokholo kunye nokusuka entliziyweni ngesenzo sokuthobeka esityhilela iimvakalelo zokuba nentliziyo yomntu kufuneka acele uncedo kwizinto zokomoya.
Nokuba ungakanani mzuzu lo sidlula kweli xesha, imithandazo yenzelwa ukuba iphakanyiswe ngabantu abasweleyo.
Akukho nto ayinakwenzeka xa sithatha umthandazo njengesixhobo sokulwa amadabi esiwabeka phambi kwethu mihla le.
Sinokubuza koko sikufunayo kunye nezo zinto ziye zaba ngamaphupha ethu kunye neminqweno kwaye ezihleli zigcinwe ngaphakathi komphefumlo wethu kwaye akukho namnye kodwa kuthi.
1 Umthandazo kwiNtombi yeGuadalupe Ngubani iNtombi yaseGuadalupe?
1.1 Umthandazo weNtombi yeGuadalupe yokukhuselwa
1.2 Umthandazo wokucela ukukhuselwa yintombi yaseGuadalupe
1.3 Umthandazo wentombi yaseGuadalupe ukuba ucele ummangaliso
Umthandazo kwiNtombi yeGuadalupe Ngubani intombi yaseGuadalupe?
Kukubonakala kweNtombi Enyulu ngo-1531 eMexico.
Kuyaziwa ukuba owokuqala ukumbona yayinguJuan Diego waseIndiya xa wayesendleleni eya kubuninzi.
Ibalisa ibali ukuba le ntombi nto yamcela ukuba akhe itempile kwaye adlulise umyalezo kubo bonke abantu abanokuthi baqale ngobhishophu.
U-Juan Diego waseIndiya wenze njalo, bonke abaphathiswe kuye, kwakungekho lula kuba akukho namnye owayemkholelwa ngoba, njengawo wonke ummangaliso, kwakuyimfuneko ukubona uphawu lokuba into eyathethwa ngumIndiya iyinyani.
storia ukuba intombi yamcela ukuba akhe itempile kwaye Dlulisa umyalezo kubo bonke abantu kunokwenzeka ukuqala kubhishophu.
UmIndiya uJuan Diego wakwenza oku, yonke into njengoko wayephathisiwe, kwakungekho lula kuba akukho mntu wayemkholelwa kuba, njengawo nawuphi na ummangaliso, kuye kwafuneka ukuba umqondiso othile ubonakale ukuba loo nto ithethwa nguloo mIndiya iyinyani.
I-Indiya ifumana umyalelo omtsha kwiNtombi-ntsapho apho iphathiswe ukuba ijonge iiroses eziphezu kwentaba, iphinda ithobele lo myalelo kwaye ikhangele iindlela ezintsha zokuzazisa ku-Bhishophu egqunywe ngengubo, Xa iiroses ziwa phantsi kwengubo, umfanekiso owaziwa namhlanje njengeNtombi yaseGuadalupe unokubonwa ubonakalisiwe.
Namhlanje, iasilica yaseSanta María de Guadalupe iyeyeyona itempile yonqulo ityelelwa kakhulu emhlabeni.
Uqikelelo lwe amashumi amabini ezigidi amarhamente Beza minyaka le bezokuvuma ukukholwa kwabo kwaye banike imbeko kule ntokazi ingummangaliso.
Umthandazo weNtombi yeGuadalupe yokukhuselwa
Ntombi enyulu yaseGuadalupe, Umama kaThixo, iNenekazi kunye noMama wethu. Yiza apha uqubude phambi komfanekiso wakho ongcwele, osishiya sibambe ongezantsi kwiJuan Diego's tilma, njengesithembiso sothando, ukulunga nenceba.
Amagama owathethileyo kuJuan ngesisa esingenakuphikiswa asavakala nangoku: "Nyana wam othandekayo, uJuan endimthandayo njengoyena mncinci kwaye ubuthathaka," xa, ukhazimla ngobuhle, uvele phambi kwamehlo akhe kwinduli yaseTepeyac. Senze sikufanelekele ukuva loo magama anzulu emiphefumlweni yethu.
Ewe, unguMama wethu; Umama kaThixo nguMama wethu, oyena mntu unesisa, unovelwano.
Kwaye ukuze ube nguMama wethu kwaye usikhusele phantsi kwengubo yakho yokhuseleko, uhlala emfanekisweni wakho waseGuadalupe. Eyona Ntombi iNgcwele yeGuadalupe, bonisa ukuba unguMama wethu.
Sikhusele kwizilingo, usithuthuzele usizi, usincede kuzo zonke iimfuno zethu.
Ngobungozi, kwizifo, kwiintshutshiso, kubuhlungu, kukushiya, kwilixa lokufa kwethu, sijonge ngamehlo anobubele kwaye soze sahlukane nathi.
Intombi enyulu uMariya, njengomama olungileyo, Uyayazi indlela yokubonelela ngokhuseleko kwaye uyinyani kubo bonke abo bamamkelayo njengomama.
Ukuya kuye ufuna ukukhuselwa sisenzo sokholo, isibindi kwaye unyanisekile. Sinokucela ukhuseleko ngawo onke amaxesha xa silufuna kuthi, kwilungu losapho okanye umhlobo.
Kukho nabo bakusebenzisa oku umthandazo Kwimpahla ethile ebonakalayo, le nkalo yomthandazo ingabonakala ingekho ngaphezulu kodwa umama uyayazi indlela yokumgcina umntwana wakhe nayo yonke into eyeyakhe.
Ngeke siye kuye ecinga ukuba akanakusinceda kodwa ngentliziyo evulekileyo Ukuthetha nathi nokusikhokela kwizinto ekufuneka sizenzile ngamaxesha onke.
Umthandazo wokucela ukukhuselwa yintombi yaseGuadalupe
Owu Ntombi Enganyangeki, Umama kaThixo oyinyaniso noMama weCawa! Wena, ovela kule ndawo ubonakalisa inceba nemfesane yakho kubo bonke abo bacela ukhuseleko lwakho; Mamela umthandazo wokuba ngokuzithemba kwethu sibhengeza kuwe size sisondeze kuNyana wakho uYesu, ongumhlanguli wethu kuphela.
Mama wenceba, Mnumzana wesipho esifihliweyo nesithuleyo, kuwe oya kuphuma usihlangabeze, thina boni.
Sinikezela ngobomi bethu, umsebenzi wethu, uvuyo lwethu, izifo zethu kunye neentlungu zethu.
Nika uxolo, Ubulungisa nempumelelo kubantu bethu; kuba yonke into esinayo kwaye siyibeka phantsi kweliso lakho, Nkosazana nomama wethu.
Sifuna ukuba ngabakho ngokupheleleyo kwaye sihambe nawe kwindlela yokunyaniseka ngokupheleleyo kuYesu Krestu kwiCawe yakhe: ungavumeli isandla sakho sithandane.
Ntombi yaseGuadalupe, Mama wase-Melika, siyakucela kubo bonke oobhishopu, ukuba nikhokelele ekuthembekeni kwindlela yobomi bobuKhristu obukhulu, uthando kunye nokukhonza ngokuthobekileyo kuThixo nemiphefumlo.
Cinga ngesi sivuno sikhulu, kwaye ucele iNkosi ukuba ibethelele ukulambela ubungcwele kubo bonke abantu bakaThixo, unike uninzi lwababingeleli nabezenkolo, bomelele elukholweni, kunye nabasasazi abanomona.
Ukukhuselwa, nya mekela, uthando, umda kwaye konke onqwenela ukumbuza kona, iindlebe zakhe zikulungele ukuva i-arcion yabantwana bakhe.
Ukholo luyinto ebaluleke kakhulu.
Kwilizwi likaThixo basicacisela ukuba masicele ukukholelwa ukuba kukho, oko kukuthi, masiyiyeke imithandazo yethu sisazi ukuba ziviwe kwaye, nangaphezulu, ziphendulwe.
IAmparo iyimfuneko kwaye umntu kufuneka asoloko ebuza ukuba impembelelo ivakalelwa ngokusuka entliziyweni.
Asilazi ikamva kwaye kungenxa yesi sizathu le nto lo mthandazo ubalulekile ukuze ushiye ezandleni zethu izicwangciso kunye nalo lonke inyathelo eseliza kulithatha.
Kungenxa yoko le nto umthandazo wobuntombi kaGuadalupe ubalulekile.
Ngamana ukhuseleko lwakhe lungasoloko lukhona kubomi bethu kwaye intsikelelo yakhe ngekhe ishiye thina kunye nosapho kunye nabahlobo.
Ukucela ukhuseleko lomntu okhethekileyo sisenzo sothando, akukho mfuneko yokuba ukhanyise amakhandlela okanye ulungiselele imeko yangaphambili yalo mthandazo onokuthi ubonakale ulula kodwa unamandla ngokwenene, kufuneka ukholelwe nje, ayikho enye into eyimfuneko.
Umthandazo wentombi yaseGuadalupe ukuba ucele ummangaliso
Ntombi enyulu yaseGuadalupe, Umama kunye noKumkanikazi welizwe lethu. Nantsi into oyithobileyo yokuthobeka phambi komfanekiso wakho.
(Beka iodolo yakho)
Kuwe sibeka lonke ithemba lethu. Ubomi bethu nentuthuzelo.
Ukuba phantsi kwesithunzi sakho esikhuselayo, kwaye kwisisu sakho somama, asinakoyika nantoni na.
Sincede kuhambo lwethu lwasemhlabeni kwaye usithethelele phambi koNyana wakho oyiNgcwele okwangoku ukufa, ukuze sifezekise usindiso lomphefumlo lwanaphakade.
Imimangaliso zizinto esikholelwa ukuba akunakwenzeka ukuba sizifezekise ngamandla abantu.
Ligama elisetyenziswa ngakumbi kwizicelo zesifo esithi, ngokwenzululwazi yezonyango, asinakho ukunyanga.
Nangona kunjalo, igama elithi ummangaliso lingasetyenziswa kwiimeko ezininzi ezinje ngezo meko apho silinde khona imali engenakukwazi ukufika okanye xa inyamalala ilungu losapho liye lahlupheka kwaye ukusuka umzuzwana ukuya komnye ubonakala ukhuselekile kwaye uphilile.
Imimangaliso ikude komthandazo kwaye uxelele ukholo oluncinci. Akukho nto ayinakwenzeka.
Unako kwaye kufuneka uthandaze kuyo yonke imithandazo kule ngcwele.
Into ebalulekileyo kukuba umthandazo weNkosazana yaseGuadalupe uye wathandazwa ngokholo oluninzi kwaye unokholo oluninzi ngaphakathi entliziyweni yakhe.
Ukhetha ukukholelwa kumandla oyinyaniso lale saint kwaye kufuneka ukholelwe ukuba uza kukunceda.